Shiinuhu wuxuu u halgamayaa sidii loo xallin lahaa tuujintii korontada oo loo xakameyn lahaa suuqa alaabta ceyriinka ah ee ka baxsan xakamaynta
Bishii Nofeembar 27, 2019, nin ayaa u soo dhowaaday warshad korontada laga dhaliyo oo ku taal Harbin, Gobolka Heilongjiang, Shiinaha. REUTERS/Jason Lee Beijing, Sebtember 24 (Reuters) -Soo saarayaasha iyo soo-saarayaasha badeecadaha Shiinaha ayaa laga yaabaa inay ugu dambayn xoogaa xoogaa gargaar ah helaan iyadoo ay ugu wacan tahay ballaarinta xannibaadaha korontada oo khal-khal gelineysa howlihii warshadaha ...
In kasta oo welwelka Evergrande uu jiro, haddana Sika ayaa weli ku rajo weyn rajada Shiinaha
Zurich (Reuters) -Ku-xigeenka Madaxa Thomas Hasler ayaa khamiistii sheegay in Sika ay ka adkaan karto kharashaadka ceyriinka ah ee sii kordhaya adduunka oo dhan iyo hubin la’aanta la xiriirta dhibaatooyinka deynta ee soo-saaraha Shiinaha Evergrande si loo gaaro yoolkeeda 2021. Ka dib markii masiibadii sanadkii hore sababtay hoos u dhac ku yimid ...
Joogtaynta warshadaha baabuurta iyo dhismaha ayaa horseedaysa baahida loo qabo dib -u -warshadaynta biraha duugga ah ee heerka kobaca sanadlaha ah ee 5.5%
Sahanka Fact.MR ee suuqa dib -u -warshadaynta biraha duugga ah ayaa si faahfaahsan u falanqeeya koritaanka dardargelinta iyo isbeddellada saamaynaya noocyada birta, noocyada duugga ah iyo baahida warshadaha. Waxa kale oo ay iftiiminaysaa xeeladaha kala duwan ee ay qaateen ciyaartoy waaweyni si ay u helaan faa'iido tartan oo ku jirta sumadda dib -u -warshadaynta biraha ...
Arbacadii, Sebtember 29, 2021 Hindiya waxay aragtay dulsaarka dahabka iyo qiimaha lacagta
Qiimaha dahabka ee Hindiya (46030 rupees) ayaa hoos u dhacay ilaa shalay (46040 rupees). Intaa waxaa dheer, waxay 0.36% ka hooseysaa celceliska qiimaha dahabka ee la arkay toddobaadkan (Rs 46195.7). In kasta oo qiimaha dahabka ee adduunka ($ 1816.7) uu maanta kordhay 0.18%, haddana qiimaha dahabka ee suuqa Hindiya weli waa ...
Sida loo doorto iska caabinta siligga kululaynta
Sida loo doorto silig kululaynta iska -caabbinta (1) Shirkadaha wax iibsada sida kuwa ka shaqeeya qalabka mashiinnada, mashiinnada wax lagu xiro, mashiinnada baakadaha, iwm, waxaan soo jeedin lahayn adeegsiga siligga NiCr ee taxanaha cr20Ni80 maadaama shuruuddooda heerkulku aysan sarayn. Waxaa jira faa'iidooyin gaar ah oo aad ...
Fur gariiradda kululeeyaha, Nickel Wire, Bayonet kululeeyaha, Wire Resistance, Bayonet Element Element, Qaybaha kululaynta,